संशोधन र चुनावको मुद्दामा सत्ता पक्ष, विपक्ष र मोर्चाको गोलचक्कर - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
संशोधन र चुनावको मुद्दामा सत्ता पक्ष, विपक्ष र मोर्चाको गोलचक्कर
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरुको त्रिकोणीय कसरत
सइन्द्र राई काठमाडौं, पुस २७
संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदले प्रक्रियामा लगेको छ। यो प्रक्रिया र विधेयक दुबैप्रति एमालेलगात विपक्षी ९ दलको विरोध कायम छ। तर, संशोधन परिमार्जन नभएसम्म विधेयक अस्वीकार गर्ने अडान लिएको मधेशी मोर्चाको आवाज प्रस्ट छैन।
जबकी सरकारले संशोधन विधेयक मोर्चाको माग पूरा गराउन भनेर संसदमा पेश गरेको हो। यसबारे नेपालखबरले राखेको जिज्ञासामा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कुनै प्रस्ट जवाफ दिएनन्। निकै लामो सम्वादका क्रममा समेत उनले यथास्थितिमा यो विधेयक मोर्चालाई मान्य हो या होइन खुलाएनन्। यति मात्रै भने, ‘सबै काम परिमार्जनका लागि भइरहेको छ। त्यसका लागि बातावरण बनाउन मोर्चा सक्रिय छ।’
यिनै महतो हुन्, जो संविधानसभा बहिष्कार गर्ने निर्णयदेखि काठमाडौंलाई दानापानी रोक्ने चेतावनी दिन समेत अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए। उनको कडापनकै कारण मोर्चाभित्र थुप्रै पटक खटपट आयो। धेरै पटक फुटको नजिक पुग्यो तर, निर्णयहरु भने सगोलमै हुँदै आएको छ।
अहिले महतो मात्रै होइन, मोर्चाका कुनैपनि नेताको उति चर्काे स्वर सुनिएको छैन। थुप्रै पटक सत्तारुढ नेताहरुसँग सम्वादमा बसेको मोर्चा विधेयकको संसदीय प्रक्रियामा चुपचाप सामेल छ। बरु, एमालेलगायत विपक्षी नेताहरुको अभिव्यक्ति चर्काे छ– यो विधेयक बाह्यशक्तिको इसारामा आएकाले पारित हुन दिन्नौं।
सरकार भन्छ– मोर्चा सहमत छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार भने यो विधेयक मोर्चाको मात्रै नभई एमालेसहितको सहमतिमा आएको हो। तर, एमाले र मोर्चा दुवैको आधिकारिक निर्णय भने अहिलेसम्म विधेयक अस्वीकार गर्ने नै हो।
सरकारको यो दावी महतो स्वीकार्दैनन्। भन्छन्, ‘परिमार्जन त हुनुपर्छ नि।’ एक तिहाई बढी मतसहित संसद र सडकमा विरोध गर्दै आएको एमाले सरकारी अभिव्यक्तिसँग पूरापुर असहमत छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल प्रधानमन्त्रीले भ्रम फैलाउन अनेकन अभिव्यक्ति दिदै आएको बताउँछन्।
यी मतमतान्तरबीच १४ मंसिरमा सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनका विधेयकहरु समेत संसदले प्रक्रियामा लगेको छ। यसमा विपक्षीको कुनै विरोध छैन। तर, संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन कानून बढ्न नदिने अडानमा रहेको मोर्चाको समेत यो प्रक्रियामा विमति देखिएको छैन।
सरकारले मोर्चासँग यसबारे सहमति गरिसकेकाले विमती नदेखिएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। यसैअनुरुप मोर्चा दुवै विधेयकमाथिको प्रक्रियामा सोमल छ।
संविधानअनुसार संशोधन विधेयक प्रक्रिया डेढ महिनासम्म चल्न सक्छ। विपक्षी विरोधकै बीच संसदमा छलफल टुंग्याउँदा पनि आम नागरिकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र ३० दिन बितेपछि विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार दलहरुसँग छलफलका लागि पर्याप्त समय छ। स्रोत भन्छ, ‘संविधानको व्यवस्था अनुरुपको यही प्रक्रियाभित्र रहेर मोर्चाले परिमार्जन पेश गर्ने सहमति भएको छ।’
विधेयक नुटंगिदै स्थानीय चुनाव घोषणा
संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको निर्वाचनमार्फत् वडा सदस्यदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म निर्वाचित गरेर मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ हिडाउने कार्यभार वर्तमान सरकारलाई छ। तर, यी तीन तहको निर्वाचन गराउन सरकारसँग एक वर्षको समय मात्रै बाँकी छ।
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाबको मिति घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘चुनाव गराउनेबारे कुनै दलले पनि निहीत असन्तुष्टि राखेर बस्नु हुँदैन। पहिलो ध्यान मुलुकलाई संवैधानिक जटिलताबाट जोगाउनु हो बुझ्नुपर्छ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच यसबारे धेरै पटक छलफल भएको कार्की बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसाल पनि चाँडै चुनावको मिति घोषणा हुनेमा सहमत छन्।
स्रोतका अनुसार दलीय अडानबीच शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक सहमति समेत जुटिसकेको छ। यही अनुसार निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरु बढाइसकेका छन् भने संसदमा विपक्षीलगायतको विरोध अनुमान गरिएजस्तो अमार्यादित छैन।
यसबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच एक्लाएक्लै र संयुक्त भेटवार्ता भइरहेको छ। कतिसम्म भने आफूबिरुद्ध संसदमा अविश्वासको मत खेपेका केपी शर्मा ओली आफ्नो पूर्ववत अडानबाट पछि हट्दै प्रधानमन्त्री दाहालसँग सम्वादमा छन्। संशोधन विधेयक खासगरी सीमाकंन हेरफेरबारे सम्झौताहिन रहने निर्णयमा रहेको एमाले नेताहरुसँग भइरहेको सम्वादले निर्वाचन गर्नेमा पुनः तीन दलले तयारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
चुनावलाई विशेष जोड दिइरहेको एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा भने माओवादी भन्दा कांग्रेस नेताहरुसँग बढी विश्वास देखिन्छ। केहीदिन अघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त खुलेरै भने– देउवा अनुभवी र जिम्मेवार नेता हुन्, उनले मुलुकलाई संवैधानिक जटिलतातिर जान दिने छैनन्।
स्थानीय चुनावपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने करारनामा रहेको बुझेका एमाले नेताहरुले यसो भन्नु अनौठो त होइन। तर, यसले तीन दललाई फेरि चुनावको मुद्दामा एक ठाउँ उभ्याउने बातावरण भने तय हुनसक्छ। यो बीचमा तीन दलका दोस्रो तहका नेताहरुको सक्रियता बाक्लिनुले पनि यो अनुमानलाई थप पुस्टि गर्छ। तर, उनीहरुले यी सम्वादहरुलाई व्यक्तिगत रहेको बताउँदै आएका छन्।
एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्ट चुनाब गराउने विषयमा एमाले असहमत नरहने बताउँछन्। भन्छन्, ‘संशोधन विधेयक असफल नहुनेमा दुइमत छैन, चुनाव गराउने विषयमा एमाले सहमत छ।’ संविधान जारी गर्न लिएको अडान, नाकाबन्दीबिरुद्ध अभिव्यक्ति र संशोधन विधेयकविरुद्धको आन्दोलनले उत्साहित एमाले तत्काल चुनाव चाहन्छ। यसर्थ एमाले विधेयक फेल गराउने र चुनाव गराउने रणनीतिमा छ।
वर्तमान सरकार गठन हुनेबेला भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लगेको सरकारले मोर्चालाई समेत ‘सेफ ल्यान्डिङ’को बातावरण मिलेको विश्वास लिएको छ। असन्तुष्टिलाई नै आधार बनाएर मोर्चा चुनावमा भाग लिने रणनीतिमा रहेको आँकलन एमालेले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो। मोर्चाको ११ बुँदेमा उल्लेख धेरै माग पहिलो संविधान संशोधनमा उल्लेख भएपनि आन्दोलन नछोड्नुमा यही रणनीतिले काम गरेको एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
तर, मोर्चा भने यो तर्कसँग सहमत छैन। अझै, पनि विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभए चुनावमा भाग नलिने अडान लिइरहेकै छ।
प्रकाशित २७ पुस २०७३, बुधबार | 2017-01-11 12:35:34
सइन्द्र राई नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्
सइन्द्र राईबाट थप
कांग्रेस नेताहरुको रोजाइमा 'मध्यमार्ग'
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिः कार्यक्षेत्र कति, शक्ति कति?
संशोधनको मध्यविन्दु खोज्दै दलहरु
सत्ता, संसद र सडक तताउने राप्रपा रणनीति
एमाले 'फिल्ड कमाण्डर'को परीक्षा
मोर्चाको चेतावनी कडा, निर्णय नरम
राप्रपाको साझा दस्तावेजः अब राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ
चुनावतिर, सुस्तरी सुस्तरी
दुई हप्ताका लागि किन रोकियो संसद्?
चुपचाप चुनावी तयारीमा कांग्रेस